ခရီးသွားဧည့်မကြာခဏကနေဒါငွေကြေးလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်, တစ်ဦးနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုအရာဖြစ်ပါသည်. ကမ္ဘာတဝှမ်း, ကွဲပြားခြားနားတဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြေးများ၏ရမှတ်များရှိပါတယ်. အနည်းငယ်ကနေဒါငွေကြေးလဲလှယ်အကြံပေးချက်များသင်ယူခြင်းသင်သည်သင်၏အသုံးစရိတ်၏အများဆုံးလုပ်ကိုကူညီနိုငျ.
လေကြောင်းလိုင်းလေကြောင်းလိုင်း – ထိုလေဆိပ်, ခရီးသွားစာသင်ခုံပိုက်ဆံပြောင်းလဲနေတဲ့အဘို့တည်ထောင်ကြသည်. ငွေလဲနှုန်းထည့်သွင်းနေကြတယ်, မကြာခဏအခြားလဲလှယ်ပေးသူထက်မြင့်သော. အများစုဟာလေဆိပ်ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းကိုအားသွင်း, သငျသညျသလောက်ကုန်ကျရသော 20% ကုန်သွယ်ပေါင်းလဒ်၏. ဤရွေ့ကားခရီးသွားများအတွက်အဆင်ပြေနေရာများ. ဒါဟာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာစေရန်ပုံမှန်အားဖြင့်အင်အားစိုက်ထုတ်သည်နှင့်လည်းထိုဒေသတွင်နေရာလေးကိုဖြစ်ပါသည်. အမှု၌သင်တို့ကိုပိုမိုမြင့်မားစျေးနှုန်းတွေကိုပေးဆောင်စိတ်ထဲမထားပါဘူး, လေဆိပ်ငွေကြေးဖလှယ်ဖို့တစျဧရိယာသည်.
ရပ်ရွာဘဏ်အဖွဲ့အစည်းများ – ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေဒါငွေကြေးလဲလှယ်န်ဆောင်မှုပေး. အများစုမှာဘဏ်လေဆိပ်ထက်အများကြီးပိုကောင်းနှုန်းထားများဆက်ကပ်. အများစုမှာဘဏ်များအဓိကအားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးကအပေါ်အခြေခံပြီးအခကြေးငွေကောက်ခံ. ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများတစ်ခုမှာ, သို့ရာတွင်, စစ်ဆင်ရေး၏နာရီ. သာပွင့်လင်းနာ​​ရီအတွင်းအရောင်းအစေဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. နောက်ထပ်ပြဿနာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများပိုကြီးပမာဏသာရှိငွေကြေးဖလှယ်မှုကိုဆက်ကပ်ရန်အနေအထား၌မကျရမည်အကြောင်းတည်းဖြစ်ပါသည်.
debit နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်များ – debit နှင့်လည်းအကြွေးကဒ်များကိုသငျသညျနိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်ဖို့အမြန်ဆုံးလမ်းပေး. ပုံမှန်အားဖြင့်ဖလှယ်နှုန်းကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်, သငျတို့သအချိန်မရွေးလဲလှယ်န်ဆောင်မှုရနိုင်ပါလိမ့်မယ်. ခရီးသွားဧည့်ဖို့လိုပါတယ်, သို့သော်, လုံခြုံရေးအားပိတ်ပြီးမဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်သူတို့ရဲ့ကဒ်၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်ပြည်ပမှာ vacationing လိမ့်မည်သောသူတို့အားပြောပြရန်သူတို့၏ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီနှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်.
ATM စက်ကိုသင်ပိုက်ဆံဖလှယ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းများဆက်ကပ်. သင့်ရဲ့ဧရိယာပြင်ပများ၏ ATM ကို အသုံးပြု. အဘို့တည်ရှိစေခြင်းငှါအခကြေးငွေနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ဘဏ်နဲ့ဆွေးနွေး.
ထို့ကြောင့်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောလေကြောင်းလိုင်းအဖြစ်ငွေကြေးလဲလှယ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်နည်းလမ်းများရှိသည်နိုင်, ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ, ခရက်ဒစ်နှင့်လည်းကတ်များငွေကြို, နှင့် ATM စက်. ဤအများဆုံးကျယ်ကျယ်အသုံးပြုဖြေရှင်းချက်များမှာ. သို့သော်လည်းက်ဘ်ပေါ်မှာ, သငျသညျငွေကြေးလဲလှယ်အကြံပေးချက်များမှကနေဒါဒေါ်လာလဲလှယ်ဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းများရှာဖွေတာရန်သင့်ကိုလမ်းပြသောအလင့်များရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းငှါ.
ဘဏ်မှာငွေကြေးဖလှယ်မှတဆင့်, သငျသညျပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးငွေရှင်းကောင်တာတွင်များ၏ရှေ့မှောက်၌စဉ်တိုင်းစစ်ဆေးမှုများလက်မှတ်ရေးထိုး. သင်ကစစ်ဆေးမှုများစောင့်ရှောက်နိုင်, တနေရာထားရဖြစ်ပျက်လျှင်, အဲဒါကိုအစားထိုးဖို့ဖို့လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်.